🥇 ▷ IPad 11 Pro wuxuu qarin karaa wax lala yaabo ✅
IPad 11 Pro wuxuu qarin karaa wax lala yaabo
Saacadihii la soo dhaafay iyo ka dib markii ay ku dhawaaqayaan Xcode qaabkiisii ​​ugu dambeeyay, qaar ka mid ah horumarayaasha ayaa helay astaamo dheeri ah oo ku saabsan iPhone iyo Apple Watch oo ay soo bandhigeen astaamo cusub oo Apple waqtigaas uusan tirin intii lagu jiray soo bandhigida. Hadda waxaa jira mala-awaal cusub, oo taasi waa Apple is-maandhaafsan karaa dheeraad ah 2 GB RAM Taasi waxay maareyn kartaa oo keliya howlaha sawir qaadista.
Sida laga soo xigtay ayuu yidhi soo-saaraha Steve Troughton-Smith, Apple waan ku rakibi kari lahaa RAM dheeraad ah iPhone-ka ugu awoodda badan, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max. Wax walba ayaa muujinaya taas waxaa jira 2 GB oo RAM ah oo loo go’doomi karo oo keliya howlaha sawirrada waxaa sameeyay kaameerada seddexda ah ee iPhone 11 Pro. Laakiin iyagu ma noqon doonaan 2 GB oo ah “caadi” Ram, laakiin way ka duwanaan doonaan barnaamijyada intiisa kale waligood ma geli doonaan.
Fikradda ayaa soo baxda kadib natiijooyin kala duwan ayaa lagu bixiyaa Ram ee iPhoneka cusub. Waxaa jira calaamado muujinaya in ay jiraan 6 GB oo RAM ah marka loo eego tijaabooyinka qaar, waxaa jira calaamado kale oo muujinaya kaliya 4 GB oo RAM ah “oo loo isticmaali karo macruufka iyo barnaamijyada” sida uu sheegayo soosaaraha. Immisa ayaa markaa sax ah? Suuragalnimada ayaa soo baxeysa inay runtii yihiin 6 laakiin kaliya 4 loo hibeeyo barnaamijyada sidaa darteedna “ay u muuqdaan” horumariyayaashu.
Qalabka loo yaqaan ‘Hardware’ oo loogu talagalay howlaha loo igmaday
In ka badan Apple markii ay dhigtay RAM gooni ah oo ah 2 GB kaliya si ay sawirro u qaado lama yaabin. Astaamaha waxaa lagu gartaa u qaybi qalabka gaarka loo leeyahay howlaha qaarkood. Waxaan leenahay tusaale ah isuduwaha mooshinka ee iPhone kaasoo kuu oggolaanaya inaad qabato howlaha goobta isla markaana aad iskuduwayso dareemayaasha. Waxaan sidoo kale leenahay “Secure Enclave” ee iPhone iyo Mac, waxaan diirada saareynaa wax walba oo quseeya amniga. In Mac, dhab ahaantii, waxay leedahay chip u gaar ah.
Haa Apple waxay dhigtay RAM dheeraad ah ama ma noqon doonto wax aan ogaan doonno markaan aragno guud ahaan aragtida qarxay ee iPhone by qaar ka mid ah sumadda sida iFixit. Xaqiiqdi waxay Apple ku noqon doontaa dharbaaxo ay ku muujiyaan inta ay doorteen sawir qaadista sanadkaan taleefannadooda.
Macluumaad dheeri ah | Steve Troughton-Smith
La wadaag iPhone 11 Pro waxay qarin kartaa wax la yaab leh: 2 GB oo dheeraad ah oo RAM ah oo loogu talagalay kamaradaha oo keliya